घर फुटबल प्रबन्धक डेभिड Moyes बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वश्रेष्ठ उपनामद्वारा चिनिन्छ; 'द ट्रान्टिक वन'। हाम्रो डेविड मोयस बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु पुरा खातामा ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केहीले डेभीड मोयेज जीवनीलाई ठान्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गर्न दिन्छ।
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
डेविड विलियम मोयस वर्ष 1963 मा डेविड मोयर्स एसआर (पिता) र जोआन मोयेस (आमा) को जन्म भएको थियो। उहाँ स्कटिश मूल हुनुहुन्छ तर जन्मे र बेर्सनेड युनाइटेड किंगडममा ल्याइयो।
एक जना केटाको रूपमा, तिनले समर्थन गरे रेंजर्स को लागी खेल्न को लागी पुरानो फर्म प्रतिद्वंद्वियों सेल्टिक। दाऊद आफ्नो कडा परिश्रम र बलियो पैतृक प्रभावमा निर्भरताको बारेमा जान्दथे।
यद्यपि मियाजको उत्थानको रूपमा विशेषाधिकारको रूपमा सम्बोधन गर्न सरल बनाइनेछ। यो वास्तवमा एकदम विपरीत थियो, वास्तवमा; बच्चाहरु को शौकिया र कलेज फुटबल टीम संग आफ्नो पिता को निर्धारित काम मा देखिए जस्तै, मोयस ले यस दिन को प्रदर्शन को मुख्य विश्वासहरुलाई बोर्ड मा लिया।
उनको शब्दहरुमा ..."मलाई एक परिवारमा ल्याइयो जो स्वयंसेवकले ड्रमचाप एमेटेट्सका साथमा एनिजल्याण्ड कलेजमा शिक्षकको रूपमा मेरो बुबाको संलग्नता मार्फत एम्बेडेड गरिसकेको थियो, जहाँ उनले उनीहरूको टोली भाग्यो।" मोयर्सले सम्झाउँछ। "मैले आफ्नो workaholic प्रकृति हेर्न जो मैले पालन गरे।"
उहाँले निरन्तर गर्नुभयो ...
"मेरो सबैभन्दा पुरानो सम्झनाहरू तिनी घर फोनहरूमा रात बिताउने रात बिताउँछन् - ती दिनहरूमा मोबाइलहरू छैनन् - र यो सँधै समय, स्थान, पिच, रेफरी, विपक्षीहरू व्यवस्था गर्दै थिए। यो सबै योजना थियो। र मेरो आमाले स्ट्रिपहरू धुलाई गर्दै थियो। उनले मोहनको प्रयोग गरे किनभने यो घरमा धुरीको धुलोको लागि धेरै धेरै भयो। हामी ब्याकलाई खेल पछि रविवारमा व्हाइटिनचमा लाउन्डरेटीमा समातेको छौँ। "
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सारांशमा क्यारियर
मोयजको खेलकुद क्यामेराले सेल्टिक केटा क्लबमा 12-वर्षको उमेरबाट लिनुभयो।
युवा डेविड मोयेस
उनले केवल 24 पटक वरिष्ठ टोलीको लागि बाहिर फर्काए। क्यास्ट्रिज संयुक्त, ब्रिस्टल सिटी र श्रुस्बरी टाउनमा कम-चाबी समय पछि उनी स्कटल्याण्ड र डनफरमलाइन एथलेटिकमा फर्किए।
डनफरमलाइन एथलेटिकमा डेविड मोयेस
त्यहाँ, उनले एक नजिकको मित्रतालाई मारेका थिए जुन इयान म्याकालसँग यो दिन बनी रह्यो, आफूलाई एक पटक स्कटल्याण्डको उज्ज्वल युवा प्रबन्धकको रूपमा मानिन्छ।
"मैले डेभीफरमलाइनमा ग्यास्साबाट डेविड र बिली डेविससँग कार चलाएँ र हामी सबै खेलको व्यवस्थापन पक्षमा धेरै चासो राख्यौं।" McCall बताउँछ। "दाऊद हरेक अवसरमा [स्कटिश स्क्यानको कोचिंग बेसमा] ठूलो थियो।"
यसले एक कोचिंग क्यारियर जडानको साथ नेतृत्व गर्यो एलेक्स फर्गसन यसमा आफ्नो हात राख्नु।
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पारिवारिक जीवन
मोयस परिवार फुटबल सम्बन्ध यस दिन बनी रहन्छ। आदर्शतः उनी आफ्नो बुबाको ह्यान्डवर्कको लागि धन्यबाद परिवारको पृष्ठभूमिबाट आउँछन्।
Moyes 'पिता, डेविड एसआर एक Everton मा एक स्काउट र पहिले एक कोच मा Drumchapel Amateurs, जहाँ Moyes आफ्नो क्यारियर सुरु भयो।
डेभिड मोयेस बुबा - डेविड मोयेस स्नर
उनको पूर्ण-समय व्यवसाय एक ढाँचा निर्माता र पछि एक ग्लासगोको एन्जिन्ल्याण्ड कलेजमा व्याख्याता थियो।
Moyes 'आमा, जोन, देखि पोर्तुश in उत्तरी आयरल्याण्ड र ग्लासगोमा लुगा पसलहरूमा काम गरे। डेभिडको चचेरे भाई, डेस्नी ब्राउन कोलोराइन फुटबल क्लब को सचिव हो।
डेभिडको भाइ केनीले फुटबल एजेन्सी जस्तै चार्ली एडम र डेभीड आफैं आफ्ना पुस्तकहरूमा ग्राहकहरू छन्, जबकि उनको चचेरे भाई, डिस ब्राउन, कोलोराइनको सामान्य प्रबन्धक हो। तल डेविड मोयेस र केनीको जस्तै उनको जस्तो दृश्य हो।
डेभिड मोयेस भाइ- केनी मयर्स
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: सम्बन्ध जीवन
डेविड मोयज आफ्नो बचपन प्रियंका, पामेला मोयेससँग विवाहित छन्।
डेभिड मोयेस र पत्नी - पामेला मोयेस
उनको श्रीमती संग उनको एक छोरी, लरेन मोयस छ जो आर्चबोशप मंदिर स्कूल र एक छोरा दाऊद डेभिड जो प्रेस्टन गए।
जस्तै उनको पिताले गरे, डेविड मोयेसले आफ्नो छोरा (डेभिड मोयेस जेनर) पनि नाम गरे। नीचे उनको परिवार को एक तस्वीर हो जब वे Wembley मा ट्राफी मनािन्छ।
डेभिड मोयज परिवार
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उनको विश्वासको लागि दोषी ठहरिँदै
यो क्याम्ब्रिज यूनाइटेडसँग एक खेलाडी भएको बेला यो भयो। मोयसले आफ्नो धार्मिक विश्वासका लागि टीम-साथी राय म्याकडोनाको दुरुपयोग पाएका थिए। Moyes एक कट्टर ईसाई अभ्यास गर्ने जानिन्छ।
म्याकडोनासोले महसुस गरे कि उनीहरुले खेल खेल्दै फोकस गर्न थालिन्। Moyes, एलन आराम र ग्राहम ड्यानियल को बोल्दै, उनले यसो भने:
"ती तीनहरू बदलिएका कोठामा बसेका थोरै किताबमा बसेर उनीहरूको विश्वासबारे छलफल गर्दा उनीहरूले राजनैतिक स्क्रैपको लागि मनोविज्ञान पाएका थिए।"
3 मार्च3मा Wigan एथलेटिक संग 9-1985 ड्रा पछ्याउँदै, म्याकडोन्टो, जुन समयमा 26 वर्षको उमेर थियो, भन्छिन् कि "बिखराएको" खेलमा पर्याप्त प्रयास नगर्ने 20-वर्षीय Moyes।
राय म्याकडोना को ब्रिटिश को जंगली फुटबलर को रूपमा मानिन्छ। उनी लोकप्रिय रूपमा मेसिनको साथमा 'ठूलो फेल' नाम भएका थिए। रेड कार्ड रय आदि। उनको क्यारियर को समयमा रेकर्ड 22 पल्ट (लाल कार्डिड) लाई पठाएको थियो। उहाँ आधुनिक दिन सर्जियो रमोसको तुलनामा हुनुहुन्छ जुन समान लाल कार्डको रेकर्ड छ।
त्यो भयानक रूपमा, एक फुटबलरको बुद्ध, एक आत्म-कमान्ड सीरियल ब्वेजर र आइमाइजरको रूपमा वर्णन गरिएको छ। वास्तवमा, म्याकडोनाको कथा हृदयको बेहोशको लागि होइन। डेभिड मोयस वास्तवमा धम्कीको साँचो शिकार थियो।
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: विफ्रेड जहा को बारे मा उनको छोरी संग सो रही छ अफवाहहरु
विलफ्र्ड ज़ादाको अनुसार: "मानिसहरूले भने," मैले दाऊद मोयेसकी छोरीलाई सोधे। मैले पनि भेटिनँ! " डेभिड मोयेसले क्रोधको साथ ईश्वर गरेकी छिन् जसको कारण जहा र तिनकी छोरी लरेनका चित्रहरु इन्टरनेटमा रिहाईयो।
यो कारण विल्फेड जहाहाले 2013 मा मैन्युनेस्टर युनाइटेडको लागि क्रिस्टल महल लाई £ 15m को लागी छोडिदिन्छ। पुरानो ट्रफीर्डमा उनको बस्ने उनको र लरेन मियस बीच ईत्यादि अफवाहहरु संग नराम्रो साबित भयो। थप यति, अवसर सीमित थियो। उनको कदम पुरानो ट्रेफर्डबाट टाढा क्रिस्टल पैलेसमा स्थायी कदम अघि कार्डिफमा ऋण जादूको साथ सुरु भयो।
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उनको गल्लम देखिन्छ
क्या तपाईंले त्यहाँ त्यहाँ बस्नुभयो त्यहाँ फोटोहरू हेर्न, वा टिभीमा कसैलाई देख्नुभयो र आफैलाई सोच्नुहुन्छ ... ..-
"पवित्र sh * t, यो व्यक्ति कसैले जस्तो देखिन्छ तर यो नरक हो?"। यो Moyes र उनको गोलम को मामला हो।
केही भन्छन् दाऊद डेयर्सले ग्लोल जस्तो देखिन्छ। यो उनको कारण भोकमरी अनुहार, ठूलो नीलो आँखहरु र भयानक gnarly आवाज छ किनकी सबै वास्तवमा यो कुरा।
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: आरोप
22 मई 2014 मा, एक वाइन बार मा एक व्यक्ति मा आरोप लगाइएको आक्रमण पछि पुलिस द्वारा मोयस को जांच Clitheroe, तर प्रहरी द्वारा कुनै कार्य लगाइएको थिएन।
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: रोनीसँग मुद्दा
मैनचेस्टर यूनाइटेड र इङ्गल्याण्ड स्ट्राइकर वेन रोनी एक पटक उनीहरूको आत्मकथामा गरिएका टिप्पणीहरूमा उनीहरूको पूर्व प्रबन्धक डेभीड मोयसले एकपटक अपहरण गरे।
पुस्तक, हकदार मेरी स्टोरीज द द द बुक, ओभरबियरिंग, नियन्त्रण र अन्तिम जिम्मेवारीको लागि एभरटन प्रबन्धक मोयसलाई दोष लगाउँछन्। रोनीको £ 27 लाख 2004 मा युनाइटेडमा स्थानान्तरित भयो फर्गुसन.
Moyes कथित रूपमा आफ्नो पूर्व खेलाडी देखि £ 1 £ 300,000 लेबेल क्षति मा दावी गरेको छ।
पुस्तकमा रोनीले दावी गरे कि उनले मयौलाई बताए कि उसले एटनटनलाई एक अख्तियारको रूपमा छोड्ने बताइन् कि उनी वेश्याहरूको भ्रमण गरेका हुन्। फुटबलरले यो सल्लाह दिन्छ कि मायसले वार्तालापको विवरण लिभरपूल इको अखबारमा लिईयो, जसले रोनीलाई बचाउनबाट सहयोग पुर्याएको क्लब छोडेर नेतृत्व गरे।
लाइट लाइटमा जारी लेखमा, म्यायसले आरोप लगाएका थिए "आफ्नो पेशेवर र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा घाइते र गम्भीर शर्मिन्दा र संकटको कारण"।
मयोजले पुस्तकको लेखक हन्टर डेविस र प्रकाशक हरिपर कोलिन्स विरुद्ध एक लिबेल कार्यवाही जारी गर्न थाले। उहाँले एक injunction को लागि प्रकाशित फेरि देखि प्रकाशित किताब को आक्रामक मार्ग को रोकन को लागि पनि छ।
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: एक पटक बीबीसी रिपोर्टरलाई हराउन एक चोटि
पूर्व एभर्टन र म्यान्चेस्टर युनाइटेड मालिक डेभिड मोयस एक पटक उनको "स्लाप" टिप्पणीको लागि उनको साथ साक्षात्कारमा एक महिला पत्रकारको लागि पाउन्ड 30,000 को फाइनल लगाइएको छ।
एसिया र बीबीसी न्यूकैसल र रेडियो पांच प्रत्यक्ष रिपोर्टर विची स्पार्क बीचको पोस्ट म्याच साक्षात्कारको अन्तमा जब उनि सनन्डल्यान्डमा लागेका थिए उनको बीच कुराकानी गर्दा एफओए द्वारा एफए द्वारा चार्ज गरिएको थियो।
वास्तवमा के भयो? ... मयोज स्पार्कको प्रश्नहरु मध्ये एक संग दुखी थियो र तिनलाई भने: "तिमी त्यहाँ अन्तमा मृग बिचको शरिर पाइरहेछौ, त्यसैले केवल आफैलाई हेर्नु हुन्छ। तपाईं अझै महिला हुनुहुन्छ तापनि तपाईं अझै एक स्लाप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को समय तपाईं यो बाटोमा ध्यान दिनुहुन्छ। "
शुक्रबार शुक्रबारको फुटबल एसोसिएसनले बर्नले विरुद्धको म्याच पछि "अनुचित र / वा धम्की दिने" टिप्पणी गरेका छन।
यद्यपि साक्षात्कार समयमै समाप्त भएको थियो, मोयसले आफ्नो टिप्पणी गरे, क्यामेरा अझै पनि चलिरहेको थियो र घटनाको फुटेज तीन हप्तापछि एक राष्ट्रिय समाचारपत्र प्रकाशित गरियो। मोयेसले घटनाको बारेमा छलफल गरिसकेका थिए जब पछिल्ला प्रेस सम्मेलनमा प्रश्न गरे।
उसले भन्यो: "क्षणको गर्मीमा मैले बीबीसी रिपोर्टरमा मेरो टिप्पणीमा एक गल्ती गरेँ, जसले मलाई गम्भीरतापूर्वक पछुताउँछ। मलाई यसको लागि निराश थियो। त्यसपछि मैले रिपोर्टरलाई फोन गरें र माफी माग्यो, जसले उनले स्वीकार गरे। यो मेरो क्यारेक्टर होइन, यो मेरो प्रकार होइन, किनकि धेरै मानिसहरू जान्दछन् र एक पटक फेरि मैले यसको लागि माफी मागें। "
सनन्डल्यान्ड एफसीले मोयसको आचरण वर्णन गरे "पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य" तर उनको द्वारा खडा भयो जब उनले प्रयास गरे - सनडेल्याण्ड को प्रीमियर लीग को स्थिति को संरक्षित गर्न को लागि
सनन्डल्यान्डको प्रतिनिधिमण्डल पछि मई 22 मा लाइट स्टेडियम मा मोयसले आफ्नो भूमिका देखि इस्तीफा दिए।
डेभिड मोयस बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: चाहेको 600 Passes per Game for United
त्यो त धेरै भयो। यो रियल म्याड्रिडभन्दा अधिक छ च्याम्पियन्स लीगको 120 मिनेटमा फाइनलमा। यो विश्वकपमा स्पेन 5-1 हराउँदा ह्यान्डलले व्यवस्थित गर्दा दुई पटक धेरै पटक छ। र स्पेनको एउटै म्याचमा व्यवस्थित रूपमा यो समान छ, जसले देखाउँछ कि Moyes लक्ष्य, यदि साँचो हो भने त्यस्तो मूर्ख थियो।
अनि भित्री लक्ष्यको साथमा भए तापनि उनको टोलीलाई किन बताउनुहुन्छ? जबसम्म उनी सम्पूर्ण खेललाई सुरक्षित पछाडि पछाडि खेल्ने खेल खर्च गर्न चाहँदैनन्।
खेलकुद कन्टन्ट नोभेम्बर 9, 20179मा: 07 बिहान
मोयसले हातमा कडा काम गरे